Semalt वेबहर्वी को बारे मा, उत्तम मुफ्त वेब स्क्रैपर्स को बारे मा बोल्छ
इन्टरनेटमा डाटा स्केपिंग प्रोग्राम. यी केही उपकरणहरू गैर-टेक्निकल प्रयोगकर्ताहरू, फ्रीलांसरहरू, र शिक्षाविद्हरूका लागि उपयुक्त छन्, जबकि अरू उद्यमहरू, ठूला ब्रान्डहरू, र व्यवसायहरूको पूर्व विकल्प हो।. वेबहार्वी एक अपेक्षाकृत नयाँ डेटा हो कि सफ्टवेयर को स्क्रैपिंग गर्न को लागी छ कि स्वचालित रूप देखि छवियों, इमेल, पाठहरु, र यूआरएल देखि जानकारी निकालन सक्छ।. यो फ्रीवेयरले तपाईंको समय डाटा निकासीमा बचत गर्दछ र सामग्रीलाई फरक ढाँचा प्रदान गर्दछ. वेबहार्वी उपकरण प्रयोग गर्न सजिलो छ जुन सेकेण्ड भित्र स्क्रैपिंग सुरु हुन्छ. यसले तपाईका कुञ्जीहरूमा आधारित विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट डेटा निकाल्छ र प्रयोगकर्ता-अनुकूल र पढ्न योग्य ढाँचामा बचत गर्दछ. यसको केही रोचक विकल्पहरू तल उल्लेख गरिएका छन्:
1. प्वाइन्ट र इन्टरफेस इन्टरफेस
दृश्य वेब स्क्रैपर हुनु, वेबहर्वीसँग एउटा बिन्दु छ र इन्टरफेसमा क्लिक गर्नुहोस् ताकि तपाईले आफ्नो डेटा स्क्रैप गर्दा स्क्रिप्ट र कोडहरू लेख्न आवश्यक छैन. साथै, तपाईं विभिन्न वेब पृष्ठहरू नेभिगेट गर्न यसको निर्माणमा ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र माउस माउससँग स्क्रैप गर्न जानकारी चयन गर्नुहोस्।. WebHearvy उन धेरै डेटा स्क्रैपिंग टूल्स मध्ये एक हो जसले गुणवत्ता परिणाम को वादा गर्छन र तपाईंलाई केहि पनि खर्च गर्दैन.
2. बहु वेब पेज
बाट स्क्रैप वेबह्वेइ प्रयोग गर्दै, तपाईं सजिलै संग विभिन्न वेब पेजहरु बाट डाटा स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै उत्पादन सूचीहरू, अनलाइन स्टोरहरू, ईमेल ठेगानाहरू, समाचार साइटहरू, यात्रा पोर्टलहरू, आदि।. यो उपकरण, न केवल डाटा निकाल्छ तर तपाईंको वेबसाइटलाई क्रल गर्न र यसको खोजी इन्जिन नतिजामा यसको रैंकिंग सुधार गर्न सजिलो बनाउँदछ।.
वेबहेर्वी संग, अब तपाईं लिंक को सूची बाट जानकारी स्क्रैप गर्न सक्छन् जुन त्यहि पृष्ठहरु को लागी या साइट को सूचीकरण गर्न सक्छ. अन्य शब्दहरूमा, हामी भन्न सक्छौं कि तपाईं वेबहर्वी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ श्रेणीमा आधारित साइटहरू जस्तै अमेजन र ईबे जस्तै डेटा लाई निकाल्न को लागी गुणवत्ता मा सम्झौता बिना. साथै, उपकरण कन्फिगर गर्न यो सजिलो तपाईंको स्क्रैप गरिएको डेटा फरक सब-कोटिहरूमा विभाजन गर्दछ.
4. छविहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
छविहरूबाट डेटा निकाल्ने हामी यी दिनमा सामना गरिरहेका एक प्रमुख समस्याहरू हो. WebHarvy संग, तपाईं एकपटक पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा आफ्नो हार्ड ड्राइभमा स्क्रैप गर्न छविहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. यो उपकरण स्वचालित रूपमा छविहरू विभिन्न वेब पृष्ठहरू र ई-वाणिज्य साइटहरूमा प्रदर्शित स्क्रैप हुनेछ.
5. स्वत: ढाँचा पत्ता लगाउने
यो उपकरण अन्य साधारण डेटा प्रोग्रामहरू स्क्रैपिंगभन्दा भिन्न छ किनभने वेबहेरिले स्वचालित रूपमा विभिन्न वेब पृष्ठहरूमा हुने डेटाको ढाँचाहरू पहिचान गर्न सक्दछ।. यसको अर्थ तपाईंले मूल्य निर्धारण साइटहरू र इ-मेल ठेगानाहरूबाट व्यक्तिगत रूपमा डेटा स्क्रैप गर्न आवश्यक छैन. यही कारणले गर्दा वेबहर्वीले तपाईंको लागि सबै चीज कन्फिगर गर्नेछ र स्वचालित रूपमा डेटा स्क्रैप गरिएको कोटिहरू र ढाँचाहरू पहिचान गर्दछ.
अन्य साधारण स्क्रैपिंग सेवाहरूको विपरीत, वेबहर्वीले प्रयोगकर्ताको लागि कीवर्ड आधारित स्क्रैपिंग प्रदर्शन गर्दछ।. यसको अर्थ हो भने यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा आधारित वेब पेजबाट जानकारी निकाल्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं WebHyvy सेटिङहरू समायोजन गर्न र उपकरणलाई यसको प्रकार्य कार्य गर्न सक्नुहुनेछ।. डेटा तपाईका कुञ्जी शब्दहरू विच्छेदन बिना वेबसाइटहरूबाट निकालिनेछ, र यो सधैँ त्रुटि-मुक्त हुन्छ.
यो भन्न को लागी सुरक्षित छ वेबह्वे किमोनो ल्याब्स र आयात को लागि एक राम्रो विकल्प हो।. io. यो फ्रीवेयरले तपाईंलाई पाठ र एचटीएमटी स्रोतहरूमा नियमित अभिव्यक्तिहरू लागू गर्न दिन्छ र तपाईंको लागि डेटा स्क्रैप गर्नु बिना डेटा स्क्रैप गर्दछ। Source .